Question: Where does Zimbabwe import wheat from? - African stories
Where does Zimbabwe import food from?
Zimbabwe Imports from South Africa of Wheat and meslin was US$21.52 Million during 2020, according to the United Nations COMTRADE database on international trade. Zimbabwe Imports from South Africa of Wheat and meslin – data, historical chart and statistics – was last updated on July of 2021.
Imports of commodity group 1101 “Wheat or meslin flour.” accounted for 0.489% of total import flow to Zimbabwe (in 2020, total imports to Zimbabwe amounted to $ 5.04 billion).
3 Turkey 10,250
4 China 10,000
In 2019, the top partner countries from which Zimbabwe Imports Food Products include South Africa, Zambia, Malawi, Kenya and Unspecified.
IMPORTANT: You asked: Who controls Nigeria economy?